Tun Tun's Photo Diary: Kandawgyi garden, Breakfast & Yangon Airport
ကန်တော်ကြီးပန်းခြံထဲကို ၀င်ပါပြီ။ ကားပေါ်ကဆင်းပြီးတံတားအတိုင်း အဆုံးထိလျှောက်သွားပါတယ်။ တံတား က maintenance လုပ်ဖို.လိုနေပြီထင်တယ်။ တချို.နေ၇ာတွေဆို၇င် ကြမ်းတောင် ကျွံနေပြီ။ ကလေးငယ်တွေဆို၇င် သတိထား၇မယ်။ ခြေထောက်သေး၇င် ကျွံကျနိုင်တယ်။ ညနေပိုင်းဆိုတော့ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေတဲ့သူတွေ။ အတွဲချိန်းတဲ့လူတွေ နဲ. စည်ကားနေပါတယ်။
ဘယ်တော့မှ မပြီးဆီးနိုင်သော ကွန်ဒိုပုံစံ တိုက်၂လုံး။
တံတား အဆုံးမှာတော့ နတ်စင်တွေ၊ ဘု၇ားဆင်းတုတော်တွေ ရှိတဲ့နေ၇ာကိုေ၇ာက်ပါတယ်။ ကန်ဘေးမှာ ဆိုတော့ သာသာယာယာ၇ှိပါတယ်။ အချိန်၇၇င် အေးအေးဆေးဆေး ထိုင်လို.ကောင်းတဲ့ နေ၇ာမျိုးပေ့ါ။
ကန်ဘောင်ပေါ်မှာ ဂွေးသီး အခိုင်ကြီးဒီလိုတွေ.ခဲ့တယ်။ေ၇ာင်းတဲ့သူလဲ မ၇ှိဘူး။ တခိုင်လုံးမပြီး ယူလာခဲ့၇မှာ။း)
နောက်တနေ.မနက်မှာတော့ စင်ကာပူကို ပြန်ဖို.လေဆိပ်ကို မနက်ပိုင်းသွားရမှာပါ။ ဒါကြောင့် မြန်မာပြည်မှာ နောက်ဆုံးမနက်စာ ကို ကျောက်မြောင်းက လက်ဖက်၇ည်ဆိုင်မှာပဲ စားခဲ့ပါတယ်။ ပဲပလာတာနဲ. မုန်.ဟင်းခါးပဲ စားခဲ့တာပါ။
မြန်မာပြည်မှာ အခုလို လမ်းဘေးခွေးတွေ၊ကြောင်တွေ မြင်၇င် အင်တန် စိတ်ဆင်း၇ဲဖို.ကောင်းပါတယ်။ တခြား နိုင်ငံတွေ မှာလို လမ်းဘေးတိ၇စ္ဆာန်တွေကို သားကြောဖြတ်ပေးတာတို.။ ဖမ်းပြီးေ၈ဟာတွေ မှာ ထားပြီး ပိုင်၇ှင်၇ှာပေးတာ တွေ မြန်မာပြည်မှာ ရှိစေချင်တယ်။ အခုတော့ တိရစ္ဆာန်ချစ်သူတွေ စပြီး လုပ်နေကြတာ ကြားလို.၀မ်းသာမိတယ်။ ဒါပေမယ့် နိုင်ငံ/မြို.နဲ. စာ၇င် လုပ်နိုင်တဲ့ volunteer က နည်းတော့ အခုလို ပဲ ဆက်ဖြစ်နေဦးမှာပါ။ ဒါတွေကတော့ ဖွံ.ဖြိုးဆဲ နိုင်ငံတွေ မှာ အမြဲတမ်း မြင်တွေ.နေ၇တာပါပဲ။ မြန်မာ တနိုင်ငံထဲမှ မဟုတ်ပါဘူး။
၂၀၁၁ ခုနစ်တုန်းက ပိုက်ဆံ အခြေအနေပါ။ ၂၀၁၃ ပြန်တော့ကျ အဲ့လို ပိုက်ဆံ အစုတ်တွေ မရှိတော့ပါဘူး။
စင်ကာပူကို Jetstar လေယာဉ်နဲ. သွားမှာပါ။ စင်ကာပူပြန်ေ၇ာက်ပြီး မကြာပါဘူး။ Malaysia က Cameron Highland ကို သွားလည်ပါတယ်။ Cameron Highland က Malaysia က ကျွန်တော်ေ၇ာက်ဖူးသမျှနေ၇ာထဲမှာ အနှစ်သက်ဆုံးနေ၇ာပါပဲ။ နောက်မှ ဘလော့မှာ ပုံတွေနဲ.အသေးစိတ်တင်ပါ့မယ်။
at 4/14/2014 06:51:00 PM